မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်း | BurmeseAsia
Home Celebrities မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်း
မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်း
အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းကတော့ အမိုက်စား အသံပါဝါနဲ့အတူ တေးသီချင်းကောင်း များစွာကိုတီဆိုထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားပါတယ်နော်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းက သူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ သူမချစ်တဲ့ ခင်ပွန်လောင်းကို အခုလိုထုတ်ကြွား လာခဲ့ပါတယ်နော်။အခုလို သူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ သူမခင်ပွန်းလောင်းကို အာကာစိုးနှင့်အတူPreweddingပုံတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းကတော့ အမိုက်စား အသံပါဝါနဲ့အတူ တေးသီချင်းကောင်း များစွာကိုတီဆိုထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားပါတယ်နော်။ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းက သူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ သူမချစ်တဲ့ ခင်ပွန်လောင်းကို အခုလိုထုတ်ကြွား လာခဲ့ပါတယ်နော်။
အခုလို သူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ သူမခင်ပွန်းလောင်းကို အာကာစိုးနှင့်အတူPreweddingပုံတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous article၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့မှာ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတဲ့ ဆရာမလေး
Next articlePDF များအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စက်ရုံတစ်ခုမိသားစုရဲ့ အလှူက ကမ္ဘာထိ လှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့